ChromeCast sy Apple TV, kojakoja roa tena samy hafa | Vaovao IPhone
ChromeCast sy Apple TV, kojakoja roa tena samy hafa
Vaovao IPad | | Apple tv, fifaninanana, iPad
Nahagaga ny rehetra ny fanombohana ny Google ChromeCast omaly. Fitaovana ampiasaina hijerena ny atiny internet amin'ny fahitalavitra fandraisam-bahininao, mifandray amin'ny HDMI ary misy habe kely ka hanafina azy ao ambadiky ny fahitalavitra, fa amin'ny maodelin'ny fahitalavitra maoderina indrindra dia tsy mila herinaratra izany. tariby ary koa 35 $ ihany ny vidiny. Ary hamaranana azy dia mifanaraka amin'ny iOS, Android, Mac ary PC… tonga lafatra fotsiny. Mazava ho azy fa ny fanehoan-kevitry ny tsirairay tamin'ny fahitana ity fitaovana ity (ary ampiako ny tenako) dia tena nankasitraka ary nahita mpifaninana iray tena henjana izahay (toa mpandresy azo antoka) tamin'ny Apple TV Apple. Saingy taorian'ny nahitanao ny fampahalalana rehetra navoaka lalina, ary namaky hevitra maromaro momba ilay fitaovana, niova ny zavatra. Chrome's Chrome dia tsy Apple TV, tsy manakaiky akory izy io. Te hahita marina izay ataon'ny fitaovana roa? Midira tsara ary hanazava izany aho.
Ireo fitaovana roa ireo dia afaka milalao votoaty amin'ny Internet, mivantana. Na dia afaka manao azy samirery aza ny Apple TV, noho ny fanaraha-maso lavitra izay ampidiriny (sy ny fifehezana mahazatra izay azonao amboarina mora foana), azonao atao ny miditra amin'ireo horonantsarin'ny serivisy toa ny YouTube fa tsy mila zavatra hafa intsony. Ny ChromeCast dia mila fitaovana foana hanomezana azy torolalana. Tsy teboka tsy dia manadanja loatra koa io, fa inona no hitako? Hatramin'izao, ao amin'ny ChromeCast tsy afaka mijery ny horonantsary YouTube sy Netflix fotsiny ianao, nambara fa hifanaraka tsy ho ela koa ny Pandora. Amin'ny Apple TV ianao dia afaka mahita ireto serivisy telo ireto manomboka izao, fa Ho fanampin'izay, tsy maintsy ampiana Hulu Plus, HBO Go sy serivisy radio hafa toa ny Spotify sy Rdio isika. Tsy lazaina intsony ny magazay votoaty azonao amin'ny Apple TV anao manokana.
Saingy hitako ve ny atin'ny fitaovako? Ao amin'ny ChromeCast no. Raha manana atiny multimédia voatahiry ao amin'ny fitaovanao ianao dia tsy ho afaka mandefa izany amin'ny fahitalavitrao amin'ny alàlan'ity fitaovana ity. Ao amin'ny Apple TV eny, misaotra ny fiasa AirPlay. Ny horonan-tsary (na ny HD) ary ny mozika izay efa notahirizinao tamin'ny iPhone, iPad na Mac anao dia azo alefa any amin'ny Apple TV, amin'ny alàlan'ny rindranasa zanatany na rindranasa antoko fahatelo hafa izay manana an'io safidy io koa. Ho hita eo amin'ny Apple TV na amin'ny Windows na Mac ny tranombokim-baovaonao iTunes, safidy hafa tsy hita ao amin'ny fitaovana Google. Miaraka amin'ny Apple TV dia afaka manao "Mirroring" koa ianao, ento any amin'ny fahitalavitra ny efijery misy ny findainao (iPhone, iPad ary Mac), zavatra tsy azo atao ao amin'ny ChromeCast, afa-tsy amin'ny fikandrana Chrome browser.
Midika ve izany fa tsy mendrika izany ChromeCast? Tsy latsa-danja kokoa. Tsy ny olon-drehetra no manana fitaovana Apple ao an-trano, raha izany, ny fitaovana roa dia afaka manao asa mitovy (YouTube, Netflix) ary na dia manana safidy bebe kokoa aza ny Apple TV, toy ny fanofana sary mihetsika iTunes, ny vidiny lafo kokoa mety tsy manome onitra ny fividiananao fanajana ny ChromeCast. Fa anio, Apple TV dia fitaovana manana safidy maro hafa ary miorina eo amin'ny tsena.. Ny ChromeCast amin'izao fotoana izao dia zazavavikely mampanantena, fa ny fanohanan'ny fampiharana ny antoko fahatelo sy ny fanovana rindrambaiko mety ho tanterahina dia tena ilaina mba hahombiazany na ho anecographe fotsiny amin'ity taona 2013 ity.
Fampahalalana bebe kokoa - Google dia manambara ny ChromeCast, ny solony amin'ny AppleTV, mifanaraka amin'ny iOS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » ChromeCast sy Apple TV, kojakoja roa tena samy hafa
Pherphenix dia hoy izy:
Tsy nisy fotoana nilazana fa tsy azo lalaovina ny atiny eo an-toerana, raha ny marina satria misy sdk dia azo inoana fa amin'ny fotoana fohy dia hiseho ny fampiharana mamela azy io, nefa miharihary fa hijery ireo izombies ho an'ny tongotra faha-5 hitsikera azy
Mamaly an'i Pherphenix
Ny ChromeCast dia TSY milalao ny atiny eo an-toerana, azonao jerena izany na aiza na aiza no jerenao, pejy momba ny nahandro Apple, Android, na Mediteraneana. Ny zavatra iray hafa dia ny rindrambaiko taty aoriana no novaina na inona na inona izy ireo, fa nalaina tao anaty boaty dia TSY manao izany. Miarahaba.
Manapaha hevitra izay tadiavinao, fa satria amin'ny ho avy dia azo apetraka ao amin'ny gadget i XBMC, na amin'ny browser, veloma amin'ny appleTV
Ny ho avy dia hisy na inona na inona izy, fa izao dia izao izany.
Ady hevitra tsara. Heveriko fa tsy handany vola firy amin'izy ireo ny fampiharana zavatra toa izany amin'ny fanavaozana ho avy.
Nalefa tamin'ny iPad-ko
lelu dia hoy izy:
Hatramin'ny androany 2020, inona araka ny eritreritrao no tsara kokoa Apple TV na ChromeCast?
Mamaly an'i lelu
Apple TV tsy misy isalasalana
Manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fisehoan'ny iOS amin'ny fiara i Tim Cook
Tutorial: Ahoana ny fomba hamafana ireo hira miovaova ao amin'ny iTunes